ऐश्वर्यालाई कोरोना हुँदा जोन सेना दुखी – Kavreonline Patra
चिया पिएलगत्तै भूलेर पनि सेवन नगर्नुहोस् यी चिज, नत्र पछुताउनु पर्ला
निरन्तरको वर्षापछि आए’को प’हिरो’मा परे’र तीन जना’को मृ’त्यु भए’को छ ।
मेसीलाई उछिन्दै रोनाल्डो बने धेरै आम्दानी गर्ने फुटबलर
५ बहिनीमा ३ ब,हिनीको पहिरोले ज्या,न लि,एपछि श’व बोक्दै दिदिहरु( भिडियो सहित)
आहा ! हात खुट्टा यस्तो भएका क्युट भाइरल बाबुका यी रमाइला टिकटकहरु
भर्खरै गुल्मीमा घ,ट्यो यस्तो घ,टना जसले सबैको मन रु,वायो
दुखद् खबर : पहिरोमा पुरिएर एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
८० वर्षिया हजुरआमाले टिकटकमा यसरी छमछम नाच्दै, सबैलाई चकित पार्दै, हेरौं उहाँकाे रमाइला टिकटक (भिडियो सहित)
नायिका प्रियंका कार्कीलाई पुत्रीलाभ, छोरीको नाम…
मुख्य पृष्ठ /News/ऐश्वर्यालाई कोरोना हुँदा जोन सेना दुखी
ऐश्वर्यालाई कोरोना हुँदा जोन सेना दुखी
काठमाडौं। बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन लगायत उनका परिवारलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएपछि केही दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए । कोरोना संक्रमित भएका महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेता अभिषेक बच्चन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राई बच्चन र उनकी छोरी आराध्या अहिले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्।
कोरोना पुष्टि भएपछि शुरुमा घरमै बसेर उपचार गराइरहेकी अभिनेत्री ऐश्वर्या राई बच्चन र उनकी छोरी आराध्यामा जोरो र घाँटी दुखाइको समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए कोरोना संक्रमण भएपछि अहिले उनका धेरै फ्यानहरुले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन्।
यसैबीच चर्चित रेस्लर जोन सेनाले अभिनेत्री ऐश्वर्या राई बच्चनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् । उनले ऐश्वर्याको तस्बिर शेयर गर्दै क्याप्सनमा केही लेखेका छैनन् उनले तस्बिर शेयर गरेर ऐश्वर्याको सम्मान गरेको र दुखी भएको बुझिएको छ । किनकी उनी बलिउडका धेरै कलाकारका फ्यान हुन्।
आज कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने
मालबाहक ट्रकमा एक क्वीन्टल गाँजा फेला
चीनले पाकिस्तानलाई झनै श’क्तिशाली बनायो, नयाँ दिल्लीदेखि अमेरिकासम्म त’रंगित !
पब्जी खेल्दाखेल्दै अचानक जोडले चिच्याएपछि १८ वर्षीय दीपकको गयाे ठाउकाे ठाउ ज्यान
भर्खरै आयो दुखद समाचार